Kedu ihe bụ Flash Sale
Fraịde, Septemba 28, 2012 Tọzdee, Septemba 27, 2012 Douglas Karr
Kedu ihe bụ ire ere ọkụ? A flash ire ere bụ a steeply ego na-enye nke nwere ngwa ngwa ngafe. Ndị na-enye Ecommerce na-amalite ịchụ ọtụtụ ahịa ndị ọzọ site na ịre ahịa ọkụ kwa ụbọchị na saịtị ha. Ndị ahịa na-alaghachi kwa ụbọchị iji hụ ihe nkwekọrịta bụ… ịzụta ihe ndị ọzọ, ọtụtụ mgbe. Ọ na-arụ ọrụ?
Brandsdị ama ama na ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe enweghịzi ike ileghara ọnwụnwa nke ire ere anya. Ndị na-ere ahịa ahịa nwere ike ijikọ ahịa ahịa flash na webụsaịtị ha dị na-enweghị itinye aka na ngalaba IT ma ọ bụ tinye nnukwu oge na ego. Site na Monetate infographic, Ahịa Flash Na-aghọ Equkpụrụ Kwesịrị Ekwesị nke letlọ Ahịa
Tags: discountna-agbadaire ere ọkụire ọkụinfographicỌpụpụ